In wada sheekaysiga Therese Casey, Kantaroole
Therese Casey oo ah saaxiibkaa ayaa dhawaan dabaaldegay 30-kii sano ee la soo dhaafay Machadka "McKnight Foundation". Si loo aqoonsado qaddiyaddan, waxaan la fadhiistay Therese si aan u waydiino su'aalo dhowr ah oo ku saabsan waqtigeeda McKnight.
Therese waa shaqaalaha ugu mudada dheer ee McKnight! Waxay ku biirtay aasaaskii 1988-kii iyada oo ah kaaliye maamuleed waxayna u adeegtey kantarooliye Foundation tan iyo 1999-kii.
Maxay bedeshay ugu badnaan 30 sano halkan?
Tiknoolajiyada ayaa dhab ahaantii bedeshay habka aan wax u qabanno. Waxaan u isticmaali jirnay dhamaanba dhaqaalaheena buugaagta hoggaamiyeyaasha waaweyn, waxaanan hubinay in dadka qaarka ah ay dhammaantood diyaar u yihiin qorayaasha. Hadda waxaan samaynaa wax walba oo ku saabsan kombiyuutarka iyo online. Waxaan la yaabanahay intee in le'eg oo aan awoodno inaanu hadda qaban karno.
Maxaad jeceshahay shaqadaada?
Waxay i siisaa dareen fiican si aan uga mid noqdo ururkan. Waxaan jecelahay macaamiisheena deeq-bixiyeyaasha ballaaran - laga bilaabo deeqaha yar-yar ee ku-saleysan gudaha-guri-siinta deeq-lacageedaal caalami ah. Qof kastaa wuxuu keenaa caqabado gaar ah, laakiin caqabadahaas ayaa ah waxa iga xajisto booska. Halkaan ayaan sii korayaa oo waxan bartaa.
Iyada oo ah kormeere, waxaan si gaar ah ugu raaxeystay maamulka iyo hagitaanka kuwa kale. Waxaan bartay in maareynta ay tahay wax badan oo ku saabsan barashada sida ay wax u barayaan.
Markii aad markii hore ka bilaabatay McKnight, miyaad u maleyneysaa in aad mustaqbalkaaga ku kharash garayn doonto?
Waxaan ahaa mid qurux badan oo aan dugsiga ka baxay markii aan bilaabay oo aanan ka fekerin in aan ka fogaado. Xaqiiqdii ma aanan maqlin machadka McKnight ilaa aan ka codsaday shaqada. Saaxiib ah oo aniga ah ayaa ii sheegay oo ku saabsan booska furan iyo inta soo hartay waa taariikh.
Intii lagu guda jiray Therese's muddo 30 sano ah, McKnight wuxuu siiyay deeqo badan.
deeqaha la oggolaaday
bixinta lacag bixinta
la siiyay deeq bixiyayaasha
Therese wakhtiga ay bilowday McKnight (1988).
Therese sannadkii waxay u dallacday Maaraynta (1999).
Magacyada U Furan Virginia McKnight Binger Unsung Hero Awards